Wafti Balaadhan oo Booqday Gobalka Siti - Cakaara News
Wafti Balaadhan oo Booqday Gobalka Siti
Shiniile( cakaaranews ) Sabti 20 Feb 2016 Wafti balaadhan oo ka kala ka socday hay’adaha bad-baadada caruurta ee save the children islamarkaana ka kala socday wadamada maraykanka, Canada, Denmark, Sweden, China, South Africa iyo masuuliyiinta ugu saraysa hay’adan save the children ee Dalkeena Itoobiya.
Waftigan ayaa waxaa horkacayay masuuliyiin heer deegaan ah oo uu ka mid yahay Wasiirka Caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid waxayna socdaal ku soo mareen degmooyin ka mid ah Gobolka Siti, iyadoo u jeedada socdaalkuna uu ahaa in ay soo indha indheeyaan waxqabadka xukuumada DDSI ee dhinacyada Caafimaadka, Biyaha, Waxbarashada, Beeraha gaar ahaan dhinaca waxka qabadka xaaladaha abaaraha ee ay keentay cimilada isbadashay.
Hadaba Waftigan booqday Gobalka ayaa ka warbixiyay socdaalkooda iyagoo sheegay in ay siwayn ula dhaceen wax ka qabadka xaaladaha abaarta sida ay xukuumada DDSI iyo tan faderaal kuba ula tacaaleen islamarkaana ugu bixiyeen dadaalka balaadhan iyagoo indhahooda kuarkay calafka xoolaha oo lagaadhsiiyay iyo waliba adeegyada aas aasiga ah ee gobalka oo ay biyuhu ugu horeeyaan. Waxayna DDSI u soojeediyeen in intii karaankooda ahaa ay waxkaqabatay xaaladan abaarta ee Gobalka Siti saameeyay.
Isku soo wada duuboo, waxaa sanadihii ugu danbeeyay ku soo badanaya deegaanka masuuliyiinta sare ee ka socda wadamada caalamka ka dib markii uu DDSI si buuxda uga hirgalay horumar waara oo lagu soo hirto